Rakipahalalana ho an'ny tompona alika
Fikojakojana sy fikarakarana
Taranaky ny alika
Mety ve ny manome alika kely?
Sokajy: Fikojakojana sy fikarakarana 0
Raha manome alika kely alohan'ny 8 herinandro ianao dia mihazakazaka ny fahafahan'ny zavatra mahantra tsy nahavita nisara feno. Andraso ary manamboara…
Voaro ve ny taolana yak?
Afaka mihinana vazaha yak ve ny alika? Azo levonina tanteraka: ny hoditra-miafina dia malaza ratsy amin'ny vavonin'ny alika. Ny poti-javatra dia mety hipetraka ao amin'ny lalan-drà mandevon-kanina, ankoatry ny fanaovana volony…
Ahoana no hampitomboanao ny haavon'ny vy amin'ny alika?
Inona no loharanom-by tsara ho an'ny alika? Raha alika salama matetika dia mahazo ny vy rehetra ilain'izy ireo amin'ny kibble-ny, ny loharanom-pahalalana hafa kosa be…
Fivarotana inona no avela alika any UK?
Afaka mandeha any amin'ny fivarotana UK ve ny alika? Mifanohitra amin'ny finoana, tsy misy lalàna manakana ny alika tsy hiditra amin'ny fivarotana, banky na orinasa eo an-toerana; ka miankina be…
Mamboatra sakafo alika Pigigree ve i Purina?
Pedigree sy Purina dia samy marika roa azo antoka indrindra amin'ny sokajy sakafom-biby. Fa rehefa natao ny fampitahana ho an'ny Pedigree vs Purina, Purina dia…
Fanontaniana: Azo alaina amboadia ve ny alika dia?
Zava-misy # 1: Tsy toy ny alika fiompy, ny alika dia manana tongotra lava, rantsan-tongotra efatra amin'ny tongony aloha ary sofina lehibe sy boribory. Na dia samy taranaky ny amboadia aza ireo, dia…
Impiry ianao no tokony hanome sakafo alika antonony?
Azonao atao ny mamahana ny alikanao indray mandeha na indroa isan'andro. Ny tsara indrindra dia ny fanaovana azy indroa isan'andro amin'ny elanelam-potoana 8-12 ora. Raha manao toy izao ianao,…
Ratsy ho an'ny alika ve ny kilalao manitra?
Araka ny voalaza tetsy ambony, ny phthalates dia vondrona akora simika misy poizina. Izy ireo no additive izay mahatonga ny kilalao biby fiompy PVC miovaova ary manasa ny alika hitsako. Phthalates dia maimbo…
Valiny haingana: Ohatrinona no ataon'ireo mpandeha alika any UK?
Ny tena marina dia ny mpandeha amboa mandoa £ 11.50 isaky ny alika, isan'ora, ary manao diabe alika 197 isam-bolana, afaka mitovy amin'ny karama mediana UK ankehitriny…
Mandra-pahoviana aorian'ny sakafo ny alika no ahafahany mandeha mitsangatsangana?
Miezaha tsy avela hilomano haingana ny sakafony ny volonao! Aza avela hilalao na hanao fanatanjahan-tena ny alika (ohatra: mandeha mitsangatsangana) mandritra ny roa farafahakeliny…
1 2 ... 1,524 Manaraka
Salama, Peter no anarako. Ao amin'ny bilaogiko no ahitanao ny fampahalalana lehibe rehetra momba ny alika - karazana, fitaizana, fikarakarana, bala, zava-misy mahaliana sns.
Nanontany ianao hoe: Mbola velona ve ilay alika kendrena?
Fanontaniana matetika: Inona no mitranga raha manaikitra amin'ny sahona ny alikako?
Ny fanontanianao: Nahoana ny alika no mankahala ny mpankafy?
Valiny tsara indrindra: ara-dalàna ve ny alikako noana foana?
Valiny haingana: Inona no mahatonga ny pitbull hanafika?
Ahoana raha mihinana Zyrtec ny alikako?
Tsara ve ny vozon'akoho ho an'ny alikakely?